Arana Saraya • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
* Ny ahy manokana studio fanorana dia tena madio ara-pahasalamana. Ny fipetrahana sy ny fandroana voafafa isaky ny mpanjifa tsirairay. Niova rongony isaky ny ampiasaina. Saron-tava respiratorana no anaovana ny fangatahana *
Ny endrik'i Bollywood hafahafa dia avy amin'ny fiaviako Indiana izay mifangaro amin'ny Libaney sy Espaniôla. Mazava ho azy fa feno endrika (37-26-40), araho ny portfolio-modeliko ao amin'ny IG: @aranasoraya. Izaho dia mpandehandeha lavitra, kolontsaina ary manana fiofanana matihanina.
Tongava mitsotra amin'ny vatana manontolo, miverena amin'ny traikefa avo lenta ao anatin'izany:
* Theragun Sports Therapy amin'ny fangatahana
* Vato mafana rehefa angatahina
* Serivisy fandroana / lamba famaohana
* Tea sy tsakitsaky
* Rano atsofoka
Tongasoa daholo ny miralenta sy ny firazanana. Sehatra SAFE sy tsy fitsarana ity.
Tsy afaka mamaly ny antso an-tariby amiko aho amin'ny ankapobeny satria matetika any amin'ny fotoam-pivoriana, na any an-dakilasy na any amin'ny toerana hafa. Azafady TEXT fotoana fanendrena tianao ho an'ny famandrihana mahomby. Ny fampahalalana momba ny famandrihana rehetra mifandraika dia homena amin'ny alàlan'ny lahatsoratra mialoha.
Alatsinainy: 10 maraina - 10 hariva
Talata: 10 maraina - 10 hariva
Alarobia: 10 maraina - 10 hariva
Alakamisy: 10 maraina - 10 hariva
Zoma: 10 maraina - 10 hariva
Asabotsy: 10 maraina - 10 hariva
Alahady: 10 maraina - 10 hariva